FISOLOKIANA AMIN’NY FINDAY : Efa betsaka ireo lasibatra eto Antsiranana
Sarotra ny fiainana, mitady izay fomba rehetra ahazoam-bola ny olona ka na tsara na ratsy dia irosoana avokoa. 18 octobre 2018
Ity farany no tena maharoboka ny sasany satria mora ahazoam-bola, noho ny fanaovana ny tsara manaraka ny rariny sy ny hitsiny.
Taty Antsiranana dia tsy vitsy ireo olona voasoloky amin’ny alalan’ny fandefasan’ireo mpisoloky hafatra fohy na Sms amin’ny alalan’ny finday, ary saika ireo laharana mpandraharaha samihafa no ampiasain’ireo mpisoloky. Ny fandefasana hafatra milaza fa « naharay vola » no alefan’ ireto farany ary koa hafatra izay milaza fa « nahazo fiara tsy mataho-dalana », tahaka izay nitranga ny talata 16 oktobra lasa teo. Renim-pianakaviana monina ao Tanambao tsena no naharay hafatra fa tafiditra 80 tapitrisa Ariary ny kaontiny. Fotoana fohy taorian’izay dia nisy niantso azy fa volan’ny dingadingana na « cocombre de mer » mila ampiasaina ilay vola. Mialoha izany dia mila mandrotsaka vola 200 000Ariary.
Mailo avy hatrany ity renim-pianakaviana ity ka nanontany namany akaiky azy, ary ity farany no nanoro hevitra azy fa fitaka ny zava-misy. Araka ny nambaran’ity renim-pianakaviana ity hatrany fa raha namerina niantso ilay laharana finday nilaza fa mila handrotsahana vola izy dia efa tsy tratra antso io.
Mampiasa anarana tompon’andraikitra amin’ny banky
Toraka izany ihany koa ny nanjo ny raim-pianakaviana iray tao Sambava ny alatsinainy teo. Volabe mitentina 30 tapitrisa Ariary indray no hafatra voarainy. Tsy mampaninona ireo mpisoloky ny mampivandravandra ny laharana findainy. Na dia fantatra aza fa voasoratra any amin’ny foibe ny mahakasika azy ireo, raha tsy hilaza fa mety ho hosoka ihany koa ny karapanondro ampiasaina nividianana izany. Raha ity tranga farany ity no resahina dia niantso ilay raim-pianakaviana naharay hafatra fa nahazo vola ireo mpisoloky.
Miandahy, miambavy ireo mpanao ratsy ireo. Araka ny voalaza dia nilaza fa hanokafan’ilay raim-pianakavina kaonty amin’ny banky Boa io vola io saingy mila mandrotsaka 600 000Ariary aloha. Tsy nampaninona azy ireo ny nanome laharana 0328142773 izay nambaran’ireo mpisoloky fa an’ny tale ny banky. Eo anelanelan’izany dia misy Ramatoa manome torohevitra azy izay mitondra laharana finday 0328203473. Tsy voan’ny fandrika ilay raim-pianakaviana satria nanontany olona akaiky azy mahakasika ny zava-misy. Ity namany ity no nanampy azy tamin’ny fanontaniana tamin’ny banky sy tamin’ny Orange. Ireto farany dia samy nilaza fa fisolokiana avo lenta no ataon’ireo mpandefa hafatra ireo fa mila mailo hatrany.
Tovolahy iray voasoloky 700 000Ariary
Mampiasa laharana maro samihafa ireo olon-dratsy, entina hamitahana olona. Ankoatra izany dia raim-pianakaviana iray tao Sambava indray no naharay hafatra fa tsara vintana nahazo fiara tsy mataho-dalana marika Nissan. Ny tompon’ny laharana 0339220170 no nifampiresaka taminy izay nilaza fa mila mandrotsaka vola 200 000 Ariary izay hikarakarana ny antontan-taratasy mahakasika ilay fiara. Tsy nanahy inona ilay tovolahy ka nandefa io vola voalaza io. Tsy vitan’izany fa mbola nanafatra vola 500 000Ariary ireo olon-dratsy, izay voalazany fa hikarakarana ny carte grise sy solika hitondrana ilay fiara ho any Sambava.
Mbola tratra ihany ka nandrotsaka ilay vola. Ny alatsinainy 15 oktobra teo dia niantso azy hatrany ireo mpisoloky, nilaza taminy fa efa tonga tao Ambanja fa lany solika tsy ampy ahatongavana any Sambava. Nanomboka teo vao tonga saina ilay raim-pianakaviana ka mba nanontany namana. Ity farany no nilaza taminy fa fisolokiana no nahazo azy fa tsy marina io resaka hafatra io. Raha nantsoina ilay laharana finday nilaza fa mila vola hividianana solika dia efa tsy tratra antso intsony. Ilaina ny fandraisana andraikitra ataon’ny tompon’andraikitra voakasika mba hisamborana ireo olon-dratsy ireo. Na izany aza dia mila mailo hatrany ny tsirairay mba tsy ho voajonon’ny teti-dratsy ataon’ireo mpisoloky amin’ny alalan’ny fandefasana hafatra mahakasika vola na filazana fa tsara vintana mahazo loka.
FISOLOKIANA AMIN’NY FINDAY
2018-10-19 07:37:02 par Ranonjandriamapionona maminiaina
Marina tokoa n fisolokina ataon’n tamba jotran’olona fa tokony hamorona kaody efatra ambaratonga ny operatera hisorohana